MACLUUMAADKA TARANKA NOOLAHA EE TEACUP POODLE DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Noolaha ee Teacup Poodle Dog iyo Sawirro
'Juliet, waa gal aad u fiican oo 4-sano jir ah, culeyskiisuna yahay qiyaastii 5 1/2 rodol (2.5 kg) (aad iyo aad u yar)
Shaaha Koobka Poodle
Teacup Poodle waa kala duwanaanshaha cabirka aan rasmiga ahayn ee Poodle. Xaqiiqdu waa, Toy Poodle, laakiin wuu ka yar yahay cabirka 'AKC Toy Poodle standard'. Biinlayaashu si ula kac ah ayey u tarmayaan si waafaqsan. Shaaha ayaa ku badan Gobollada. Waxay u muuqdaan inay noqdaan 9 inji ama ka yar, miisaankooduna ka hooseeyo 6 rodol. Teacup Poodle waa uun magac loo bixiyo Poodles aad u yar oo ay bixiyaan kuwa soo dajiya, sidaa darteedna, ma jiro heer caalami oo loogu talagalay kuwa iyaga dhaqda.
Marka loo hagaajiyo si loo muujiyo heerarka eeyga jirka waxaa loola jeedaa inuu bixiyo muuqaal muuqaal ah. Waxay leedahay qiyaastii dherer la mid ah dhererka meesha engegay. Qalfoofka waxaa si dhexdhexaad ah loogu soo koobay joogso yar laakiin sugan. Waxay leedahay gun dheer, oo toosan. Indhaha mugdiga ah, ee u eg oval-ka ayaa xoogaa kala fog oo waa madow ama bunni. Dheguhu waxay u sudhan yihiin meel u dhow madaxa wayna dheer yihiin oo fidsan yihiin. Labada lugood ee hore iyo gadaalba waxay u dhigmayaan cabirka eeyga. Khadka sare waa heer. Dabada ayaa la dhigay oo kor loo qaaday. Mararka qaarkood waxaa lagu xiraa kala bar dhererkiisa ama ka yar si eygu u ekaado mid dheellitiran. Waxaa laga yaabaa in la tirtiro Cagaha u eg-oval-ka way yaryihiin oo suulasha ayaa qalooca. Koodhku waa mid duuban ama xadhig leh. Waxay ku jirtaa dhammaan midabada adag oo ay ku jiraan madow, buluug, qalin, cawl, kareem, abrikot, casaan, caddaan, bunni ama kafee-au-lait. In kasta oo aysan sameynin heerka bandhigga qoran, kuwa wax soo saara qaarkood ayaa tarma Poodles midabbo kala duwan leh. U fiirso qurxinta noocyada kala duwan ee Poodle clips.
Teacup Poodle waa mid caqli badan. Si aad u jawaab celin badan, waxaa la sheegaa inay tahay mid ka mid ah noocyada ugu tababbarka badan. Macaan, farxad, qosol iyo nool, waxay jeceshahay inay dadka la joogto. Farxad leh, aad u xiiso badan oo xiiso badan. Bulsho iyaga si fiican. Waxay u sameeyaan ilaalin aad u wanaagsan cabbirkooda. Iyadoo aan lahayn nooca saxda ah iyo xaddiga jimicsiga waxaa laga yaabaa inay yihiin dad sare oo xishood badan. Haddii aadanuhu uusan ahayn 100% hogaamiyaha xirmada , Waxaa laga yaabaa inay qabsadaan haddii lagu jeesjeeso ama lala yaabo. Poodles-yada Carruurta lagu ciyaaro ayaa guud ahaan ku wanaagsan xayawaannada kale iyo eeyaha. Haddii aan la siinin sharciyo la raaco oo la xaddido waxa ay yihiin, oo aan loo oggolaan inay sameeyaan, noocani wuxuu u muuqan doonaa inuu ciyo badan. Ha u ogolaan eeygan yar inuu horumariyo Cudurka Dog yar , dabeecadaha bini'aadanka ee kiciya eeygu aaminsan yahay inuu yahay hogaamiyaha aadanaha. Tani waxay keentaa heerar kala duwan arrimaha dhaqanka , oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn qabsashada, oohinta, ilaalin , dalbanaya, aaminaad darro carruurta iyo mararka qaarkood dadka waaweyn, xasaasi ah, kacsan, oo lagu habeeyay shisheeyayaal iyo qeyla-dhaan xun, sida eygu isku dayo inuu u sheego dadka waxa uu isagu doonayo inay iyagu sameeyaan. Eygan yar wuxuu ku fiicnaan karaa carruurta, hase yeeshe waxaa badanaa lagula taliyaa carruurta waaweyn ee yaqaan sida loo yaqaan muujiyaan xirfadaha hoggaaminta . Sababta ayaa ah in bini'aadamka intooda badani eyda ula dhaqmaan si taas oo ka dhigaysa iyaga oo aan hubin cidda hoggaamiye kooxeedku ku jiro xiriirka eyga aadanaha . Eyga, maskaxdiisa, wuxuu ku qanacsan yahay inuu yahay hogaamiyaha aadanaha . Kuwani maaha Astaamaha Shaaha Koobka Poodle, laakiin waa astaamo ay keeneen milkiilayaal jilicsan. Hubso inaad tahay eeygaaga mid adag, iswaafaqsan, kalsooni leh hoggaamiye xirmo, wax siinaya jimicsi maskaxeed iyo jimicsi maalinle ah si loo helo eey aamin ah, maskax ahaan deggan.
mini midab adhijiraha australiaanka ah
Ka yar Poodle-ka Ciyaaraha. Ma ahan kala duwanaanshaha cabirka rasmiga ah ee 'AKC', hase yeeshe waxay noqotay nooc caan ah oo aan rasmi ahayn.
Dhererka: 9 inji ama ka hooseeya (22 cm)
Miisaanka: ka yar 6 rodol (3 kg)
Nooc cimri dheer, Poodles waa, si kastaba ha noqotee, waxay ku xiran tahay cuduro badan oo hidde ah. Qaarkood waxay u nugul yihiin IMHA (Immune Mediated Hemolytic Anemia), qiiq baa ku dhacay, sonkorow, suuxdin, wadno xanuun, PRA, indhaha oo dareera, dhego xanuun iyo dhibaatooyinka dheef-shiidka. Dhibaatooyinka indhaha sida indho-beelka iyo indho-indheynta soo noqnoqota ee soo noqnoqota taasoo sababi karta indho la'aan Xaaladaha maqaarka, oo laga yaabo inay sabab u tahay adeegsiga xirfaddaha loo yaqaan 'clippers'. Poodles Brown waxay u muuqdaan inay noqdaan kuwo cirro ah oo aan qaan gaadhin. Xasaasiyaddu waa wax caadi ah, mararka qaarkood shaambo iyo / ama midab xoojiye.
Teacup Poodle wuxuu ku fiican yahay nolosha guryaha. Waa mid aad u firfircoon gudaha gudihiisa waana wax hagaagsan bilaa deyr.
Poodles Teacup waxay u baahan yihiin a socod maalinle ah . Cayaartu waxay daryeeleysaa baahiyo badan oo jimicsi ah, hase yeeshe, sida noocyada oo dhan, ciyaartu ma buuxin doonto dareenkooda aasaasiga ah ee socodka. Eeyooyinka aan helin socodka maalinlaha ah waxay u badan tahay inay muujiyaan dhibaatooyinka dhaqanka. Waxay sidoo kale ku raaxeysan doonaan rooti wanaagsan meel aamin ah oo furan oo ka baxsan leedhka, sida barxad weyn oo ood leh. Waxay jecel yihiin biyaha iyo kal-fadhiyada jacaylka ee ciyaarta.
Qiyaastii 2 ilaa 4 eey
Poodles waa in si joogto ah loo maydhaa oo la xajiyaa lix ilaa sideed toddobaad kasta. Nadiifi oo ka hubi dhegaha si joogto ah wax ama caarada ama caabuqa oo soo bixi timaha ka soo baxa gudaha kanaalka dhegta. Ilkaha waxay u baahan yihiin miisaan balaaran. Maadaama uusan jaakadu daadin waxay u baahan tahay in la jarjaro. Waxaa jira dhowr nooc oo kala duwan oo loo yaqaan 'Poodle clips'. Kuwa ugu badan ee milkiileyaasha xayawaanku leeyihiin ayaa ah fududaan daryeel ah oo loo yaqaan 'xayawaanka xayawaanka,' 'yar yar' ama 'yar yar' halkaas oo jaakaddu ka gaabin jirka oo dhan. Muuqaaladda bandhiga caanka ah waa sadarka Ingiriisiga iyo qaybta Qaaradaha halka qaybta dambe ee jidhka la xiirto, jijimooyin looga tago hareeraha anqawyada, iyo pom-poms ayaa looga tagaa dabo iyo miskaha. Heerka AKC wuxuu u oggol yahay eey ka yar hal sano in lagu muujiyo aaladda loo yaqaan 'puppy clip' oo leh shuruudo gaar ah sida foorarsiga dhamaadka dabada. Noocyada kale ee koodhka ah ayaa ah koodhka qaaradda ee la beddelay, magaalada iyo waddankiisa, xayndaabka ama kaydka adeegga, kaydka xagaaga, iyo Miami ee bikini clip. Poodles wax yar ayey daadiyaan timo la'aan waxayna kufiicanyihiin kuwa xasaasiyadda qaba .
Poodle-ka waxaa caan ku ahaa Galbeedka Yurub oo dhan ugu yaraan 400 oo sano waxaana lagu xardhay sawirro qarnigii 15-naad iyo bas-qabow laga soo bilaabo qarnigii 1aad. Mawduuca waa mid lagu muransan yahay halka eey si rasmi ah loogu horumariyey oo cidina run ahaantii ma oga dhalashada asalka ah ee asalka ah. Faransiisku waxay sheegteen asal ahaan, laakiin AKC ayaa sharaf siinaya Jarmalka, halkaas oo ay sheegeen in loo adeegsaday eey biyo ka soo saara. Sheegashooyinka kale waxay ahaayeen Danmark ama Piedmont-kii hore. Waxa hubaal ah in eeygu ahaa farac ka mid ah hadda-dabar go'ay Eyga Biyaha ee Faransiiska, Barbet iyo suurtagal ahaan Hungary Water Hound. Magaca 'Poodle' waxay u badan tahay inuu ka soo baxay ereyga Jarmalka 'Pudel,' oo macnaheedu yahay 'mid ku ciyaara biyaha.' Muuqaalka 'Poodle clip' ayaa waxaa loogu talagalay ugaarsadayaasha si ay eeyaha uga caawiyaan inay si hufan u dabaashaan. Waxay timaha uga tagi lahaayeen laabatooyinka isgoysyada si ay uga ilaaliyaan qabow daran iyo cawsduur fiiqan. Ugaarsadayaasha Jarmalka iyo Faransiiska ayaa u isticmaalay Poodle sida gundog iyo dib u habeyn haadka shimbiraha iyo urinta shixnadaha waaweyn ee dhigta dhulka hoostiisa. Faransiisku wuxuu bilaabay inuu u adeegsado jilitaanka inuu noqdo jilaa circus sababtoo ah eeyga sirdoonka sare iyo tababbarka. Noocani wuxuu caan ku noqday Faransiiska, taas oo keentay magaca caanka ah ee 'French Poodle,' laakiin dadka Faransiiska dhab ahaan waxay ugu yeeraan 'Caniche,' oo macnaheedu yahay 'eyga duck.' The Ciyaaraha iyo Poodle Guntin noocyo ayaa laga soo saaray eyda waaweyn, maanta loo yaqaan Poodles-ka caadiga ah . Qarnigii 18aad poodle yaryar ayaa caan ku noqday dadka boqortooyada. Saddexda cabbir ee rasmiga ah waa Toy, Miniature iyo Standard Poodle. Waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin hal nooc oo waxaa lagu xukumaa isla halbeeg qoran laakiin leh cabirro kaladuwan oo kala duwan. Bixiyeyaashu sidoo kale waxay tarmayaan cabbirka udhaxeeya ee loo yaqaan a Klein Poodle (Dhexdhexaad Poodle) iyo Poodle ka yar oo Teacup ah. Qaar ka mid ah hibooyinka Poodle-ka waxaa ka mid ah: dib u soo ceshan, firfircoonaan, ilaalin, adeecid tartan iyo qabashada tabaha.
Gun Ey, AKC Isboorti
Maxidoodle cadcad Teacup Poodle 7 jir ah, culeyskiisu yahay 5 rodol (2.2 kg) - 'Max wuxuu iigu yimid 8 toddobaad ka dib carmal waayeel ah oo daryeeleysay lammaanayaasheeda taranka sida haddii ay yihiin carruurteeda. Ilaa uu ka gaadhay 3 jir, wuxuu ku soo wareegey guriga isagoo ku jira jeebka khamiiskayga, iminkana markuu jiro 7 iyo 5lbs wuxuu sii wadaa inuu ku dul istaago gacanteyda bidix ee rogmada isaga oo gadaashiisa salka ku haya gacanta. Waxaan jecelahay inaan kayak geeyo ilo badan oo ku yaal Florida Max-na sidoo kale wuxuu jecel yahay fuulista, aniga oo dhabarka iga raacaya suuf aan ku dhajiyo dusha sare ee kayakkayga, xitaa wuxuu i raacay 4 maalmood webiga sandbar ee xerooyinka. Max sidoo kale wuxuu jecel yahay inuu maamulo agagaaraha Tout d'Suite, bisadeyda 20 # madow, oo uu cuno dhamaantiis bisad cuntada. Max waa safar aad u fiican wuxuuna ku safray hawada / gawaarida / basaska dhamaan Mareykanka iyo xitaa magaalada Quebec, Canada. Waxaan ku hayaa isaga oo loo qurxiyay goynta qaaradda wuxuuna u xajinayaa sida amiir yar, dusha ama ka saarida xarigga. Waa edeb badan yahay mana dawarsado mana xado cuntada dadka. Max wuxuu jecel yahay inuu aniga ama Tout d'Suite dhex galo ciyaar firfircoon oo cayrsasho ah. Waan jeclahay saaxiibkay! '
Maxidoodle cadcad Teacup Poodle 7 jir ah, culeyskiisu yahay 5 rodol (2.2 kg)
Juliet marada cad ee loo yaqaan 'Teacup Poodle' markay tahay 4 sano jir, culeyskeeduna yahay 5 1/2 rodol (2.5 kg) oo ay dhabarka ku sidato alaab ay ku ciyaaraan
Juliet marada cad ee loo yaqaan 'Teacup Poodle' markay tahay 4 sano jir, culeyskeeduna yahay 5 1/2 rodol (2.5 kg) oo leh madax tiira ubax ah oo madaxeeda ah.
Juliet marada cad ee loo yaqaan 'Teacup Poodle' markay tahay 4 sano, culeyskeeduna yahay 5 1/2 rodol (2.5 kg) oo gashan jaakad
Juliet marada cad ee Teacup Poodle markay tahay 4 sano jir, culeyskeeduna yahay 5 1/2 rodol (2.5 kg) gudaha aqalkeeda eyga ah
Juliet Cadka cad ee Teacup Poodle markay tahay 4 sano, culeyskiisu yahay 5 1/2 rodol (2.5 kg)
'Kuwani waa sawirrada' Teacup Poodle ', Penelope. Penny waa 2 jir culeyskeeduna yahay 5 rodol (2.3 kg). Waxay qiyaastii 8 inji dhererkeeda tahay garabkeeda. Iyadu waa eey aad u faraxsan. Penny waa gabar caafimaad qab badan waxayna ku raaxeysataa safarradeeda dhaqaatiirta xoolaha !! Penny aad ayey u wanaagsan tahay, waxay had iyo jeer ii ogolaataa inaan hagaajiyo timaheeda iyo cidiyaha! Waxaan u maleynayaa inay tahay eey aad u nasiib badan oo ay hesho jacayl badan, laakiin sidoo kale inbadan jimicsi iyo kicinta maskaxda . Penny waa caafimaad qabtaa maxaa yeelay iyada kaliya ayaa loo oggol yahay inay iyada cunto cuntada eyga , weligaa dadna cunno ma cunaan. Waxaan u maleynayaa inay tani ka caawisay inay ka hortagto inay noqoto cunte cunteed, taas oo dhibaato ku noqon karta eeyaha yaryar ! ' Lahaanshaha sawirka Lilac's Toy Poodles
Penelope (Penny) madoowga Teacup Poodle ee 2 sano jirka ah, sawirka waxaa iska leh Lilac's Toy Poodles
Noocyada Poodle Mix Mix ee caanka ah
Poodle-ka caadiga ah
godka sanka oo cas oo lagu qaso shaybaarka
sawirada shilinta eyga
retriever dahab ah oo sii jooga eey